Tim Cook iye amene anosimbisa zviri pamutemo kuti ivo vari kushanda pamota dzinozvimiririra, iyo Project Titan iripo | IPhone nhau
Tim Cook pachake anozvisimbisa zviri pamutemo kuti vari kushanda pamota dzinozvimiririra, Project Titan iripo
Mazhinji anga ari makuhwa atakaona mumwedzi yese iyi pamambure nezve mukana wekuti Apple yakanyudzwa mukuvandudzwa kwesystem yemota dzakazvimiririra. Mushure mekudonha kwakati wandei muchimiro cheApple mota dzine akawanda ma radar nema sensors, ikozvino Tim Cook pachake, uyo anotisimbisa zviri pamutemo kwatiri kuti vari kushanda pa software yemota dzinozvimiririra, saka zvinosimbiswa kuti avo veCupertino vakanyudzwa mukati iyo Project Titan iyo yakanzwika zvakanyanya nezve. Kwete, hazvisi zvekugadzira mota yako yakazvimiririra, kure nazvo, CEO anotsanangura chikamu cheichi chirongwa muhurukuro yakagadzirwa paBloomberg TV.
Mashoko aCook mubvunzurudzo iyi anga akajeka
Tiri kushanda pazvirongwa zvekuzvimiririra, tekinoroji yakakosha yatinofunga yakakosha paApple. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakaomesesa zvemapenzi enjere anogona kushandisirwa sezvo zvichida mapoinzi akati wandei kufunga nezvazvo uye isu tiri kutarisa kumasystem ekuzvimirira. Iko kushandiswa kwemotokari dzemagetsi chiitiko chinoshamisa.
Zvino chinhu chakakosha ndechekuti zvinozivikanwa zviri pamutemo nezve chirongwa ichi nemukuru wecomputer iye, uye kuti Apple iri kusimudzira nekushanda kuitira kuti kuzvitonga, mota dzemagetsi zvakawandisa pamwe nemukana wekushandisa zvekufambisa zvakagovaniswa mumaguta ndezvezvino. Idzi ndidzo mbiru dzeichi chirongwa cheApple matiri isu zvinojekesa kuti vari kusiya kuyedza kugadzira yavo mota kuti vatarise mukugadzira smart system yevanogadzira mota kuti vashandise. Munhu anotarisira kuita chirongwa ichi ndiBob Mansfield.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tim Cook pachake anozvisimbisa zviri pamutemo kuti vari kushanda pamota dzinozvimiririra, Project Titan iripo
Microsoft inozivisa hukuru hukuru hweMinecraft
iOS 11 inozotibvumidza kuyananisa iyo data kubva kuhutano Hutano neICloud